Companylọ ọrụ - Hebei Faye Co., Ltd.
Nwa Nwa Oche
Isiokwu Change Baby
Nwa Moses Basket
Tebụl ụmụaka na oche
Ijere ndi pere mpe ozi, nchekwa enweghi mgbe nile maka anyi.
Hebei Faye Co., Ltd bụ ọkachamara na-eweta ngwaahịa pụrụ iche na Home arịa karịsịa akwa ụmụaka / ụmụaka na ụfọdụ arịa ụlọ, ihe aka ụlọ wdg kọntinenti abụọ gara aga!). Ndị ahịa anyị gụnyere ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ahịa, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị (Amazon, Ebay), ndị na-azụ ahịa na-erekwa ahịa ụwa niile. Na-ejere ụmụ mmụọ ozi ozi, anyị ghọtara ihe dị mkpa maka ngwaahịa ahụ ga-adị ọfụma, yabụ nchekwa bụ mgbe niile NO.1 maka anyị.
Na-eburu ibu ọrụ a, anyị maara ụkpụrụ dị mkpa na ASTM, EN, AS / NZS ... ụkpụrụ nchekwa ma dabere na nke a, anyị nwere ndị otu QC siri ike na-agbaso mmepụta tupu / etiti / njedebe iji mezuo nkwa ngwaahịa ikpeazụ. ihe ndi ahia anyi choro.
Nabata ndị ahịa niile ka ha kwuo okwu :)
N'ihe dị ka ahụmịhe 10years dị na ngalaba a, anyị maara ụkpụrụ dị mkpa na ASTM, EN, AS / NZS nchekwa, yabụ na ngwaahịa anyị ruru eru ma nwee nchekwa mgbe niile. Inye ọnụ ala dị ọnụ ala abụghị ihe mgbaru ọsọ anyị. Kama, anyị na-arụ ọrụ na ngwaahịa ruru eru ma dị mma ma buru ụzọ rụọ ọrụ na ọnụahịa dị ala. Ebe ọ bụ na o siri ike idobe otu ihe mgbe niile na-ere ahịa kachasị mma, anyị na-emepụta ihe ọhụrụ ma nwee / na-arụkọ ọrụ na ndị nrụpụta dị iche iche iji weta ngwaahịa ọhụụ kwa afọ. , gụnyere ndị na-ere ahịa Amazon, ụdị ntanetị, ndị ahịa, ndị na-ere ahịa wdg.
Ọ ga-abụ ihe nsọpụrụ mụ na gị ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na ekwere. Ọzọkwa, ọ ga-abụ njem dị ụtọ na ndụ anyị
ANY I OZ O
7x24x365 ọrụ + otu QC nwere ahụmịhe, ịdị mma bụ mgbe niile kachasị elu nke nọ na nchekwa! Onye ọ bụla na-enwe nchegbu banyere ọnụahịa ahụ ma anyị ga-ekwu na ọnụahịa anyị nwere ike ọ gaghị abụ nke kachasị mma mana ọ nwere ezi uche, a na-enye ndị nlele n'efu maka nyocha gị. Obi dịkwa m ụtọ inye gị ihe ahaziri iche n'okpuru ika nke gị. Obere enyemaka na-eweta nlọghachi dị ukwuu, nwee olileanya ịkwado ibe gị ogologo oge!
Nweta Ngwaahịa anyị ọhụụ ma ọ bụ Pricelist
Coronavirus (COVID-19) ma na-elekọta gị ...
Ndụmọdụ Coronavirus (COVID-19) dị ime